एनआरएनएबाट आफ्नै निर्णयको उल्लंघन! - Harekpal Harekpal
एनआरएनएबाट आफ्नै निर्णयको उल्लंघन!
गैर आवासीय नेपाली संघ (एनआरएनए) ले नेपाल सरकारलाई नै ढाँटेको खुलासा भएको छ ।
संघको ‘विशेष अन्तर्राष्ट्रिय महाधिवेशन’ गर्ने नाममा संघको नेतृत्वले परराष्ट्र मन्त्रालयको निर्देशन अवज्ञा गरेको र महाधिवेशनका लागि अपनाइने विधिका बारेमा मन्त्रालयमा पेश गरेको प्रतिबद्धता पनि उल्लंघन गरेको पाइएको छ ।
विशेष महाधिवेशनका लागि मन्त्रालयले तीन शर्त राखेको छ । पहिलो– अनलाइनमार्फत भर्चुअल महाधिवेशन गरेको सुनिश्चितताको कागजात मन्त्रालयमा पेश गर्ने ।
विधानको धारा १३.७ अनुसार नवौ महाधिवेशनमा सहभागी प्रतिनिधिहरु नै यस विशेष महाधिवेशनका समेत प्रतिनिधि हुने छन् । तर, नवौं महाधिवेशनपछि सदस्यता लिएका व्यक्तिहरुलाई समेत प्रतिनिधिका रुपमा चयन गरी दर्ता गराइएको छ ।
संघको नेतृत्वले विशेष महाधिवेशनको घोषणा गरेपनि सचिवालयमै विवाद उत्पन्न भएको छ । नेतृत्वमा रहेका केही व्यक्तिले मनोमानी विधान मस्यौदा समिति र सुझाव समिति गठन गरेको भन्दै आलोचना भएपछि सचिवालय निर्णयविहीन भएको छ ।
एनआरएनएको विशेष अधिवेशन रोक्न माग गर्दै परराष्ट्रमन्त्री ज्ञवालीलाई..
महामारीको मौका छोपेर जबर्जस्ती विधान पारित गर्न खोजिँदै..
एनआरएनको विवाद उत्कर्षमा, विशेष अधिवेशन रोक्न माग गर्दै..
कोभिडबाट पोर्चुगलमा नेपाली युवकको मृत्यु